Cookies akabatanidzwa nemapeji pane Law & More Websites
Chii chinonzi cookies?
Kuki ndiyo yakareruka, diki mameseji faira iyo inoiswa pakombuta yako, foni kana piritsi paunoshanyira mawebhusaiti e Law & More. Cookies akabatanidzwa nemapeji pane Law & More mawebhusaiti. Iyo ruzivo rwakachengetwa mukati mayo inogona kutumirwa kudzoka kumaseva pane inotevera yekushanyira webhusaiti. Izvi zvinobvumira webhusaiti kukuziva iwe, sekunge zvakadaro, panguva yekushanya kunotevera. Chinhu chakakosha basa rekuki ndiko kusiyanisa mumwe mushanyi kubva kune mumwe. Naizvozvo, makuki anogara achishandiswa pamawebhusaiti iwe unofanirwa kupinda mukati. Semuenzaniso, kuki inovimbisa kuti iwe unongogara uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchishandisa webhusaiti. Iwe unogona kuramba kushandiswa kwemakuki chero nguva, kunyange izvi zvinogona kudzikamisa mashandiro uye kusununguka kwekushandisa webhusaiti.
Law & More inoshandisa makuki anoshanda. Aya ndiwo makuki akaiswa uye anobatiswa newebsite yacho pachayo. Anoshanda makuki anodiwa kuitira kuti ave nechokwadi chekuti webhusaiti inoshanda nemazvo. Aya makuki anoiswa nguva nenguva uye haazodzimwa kana iwe ukafunga kusatambira kuki. Ma cookie anoshanda haachengete munhu data uye haana ruzivo rwamungateedzerwa. Zvekushanda makuki ndewemuenzaniso anoshandiswa kuitira kuisa mepu nzvimbo kubva kuGoogle Mepu pane webhusaiti. Ruzivo urwu rwusingazivikanwe zvakanyanya sezvinobvira. Uyezve, Law & More yakaratidza kuti hatigovane ruzivo neGoogle uye kuti Google ingangoshandisa data ravanowana kuburikidza newebhusaiti nekuda kwavo.
Law & More inoshandisa makuki kubva kuGoogle Analytics kuitira kuti itarise maitiro evashandisi uye maitiro ese uye kuwana mishumo. Pakati peichi chiitiko, data rako rewebhu vashanyi rinogadziriswa nekushandisa analytical cookies. Maketi ekuongorora anogonesa Law & More kuyera traffic pane webhusaiti. Nhamba idzi dzinoona kuti Law & More inonzwisisa kuti kazhinji webhusaiti inoshandiswa, ndeipi ruzivo vashanyi vanotsvaga uye ndeipi mapeji ewebhusaiti anoonekwa zvakanyanya. Semagumo, Law & More inoziva zvikamu zvewebsite zvakakurumbira uye ndeapi mabasa anoda kuvandudzwa. Iyo traffic iri pawebhusaiti inoongororwa kuitira kuti ivandudze webhusaiti uye kuti zviitiko zvevashanyi vewebsite zvive zvinonakidza sezvinobvira. Nhamba dzinounganidzwa hadziwanikwe kuvanhu uye hadzi zivikanwe zvakanyanya sezvinobvira. Nekushandisa iyo Law & More mawebhusaiti, iwe unobvuma kugadziriswa kwe data rako pachako neGoogle nenzira uye nezvinangwa zvinotsanangurwa pamusoro apa. Google inogona kupa ruzivo urwu kune vechitatu kana Google ichisungirwa zviri pamutemo kuita kudaro kana kuita kunge mapato echitatu anogadzirisa ruzivo pachinzvimbo cheGoogle.
Cookies ezvezvenhau kubatana
Law & More inoshandisawo makuki kuti igoneseke magariro enhau. Iyo webhusaiti ine zvinongedzo kune zvemagariro social Facebook, Instagram, Twitter uye LinkedIn. Izvi zvinongedzo zvinoita kuti zvikwanise kugovana kana kusimudzira mapeji pane aya mawebhusaiti. Iyo kodhi inodikanwa kuitira kuti uzive izvi zvinongedzo zvinotumirwa neFacebook, Instagram, Twitter uye LinkedIn pachavo. Pakati pevamwe, aya makodhi anoisa cookie. Izvi zvinobvumira masocial network kuti akuzive iwe kana wapinda mune iyo social network. Uyezve, ruzivo pamusoro pemapeji iwe unogovanhwa Law & More haina simba pakuiswa uye kushandiswa kwemakuki nevanhu vechitatu. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve data yakaunganidzwa nemasocial media network, Law & More inoreva izvo zvakavanzika zve Facebook, Instagram, Twitter uye LinkedIn.
Kana iwe usingade Law & More kuchengetedza makuki kuburikidza newebhusaiti, unogona kuita kuti ugamuchire kugamuchirwa kwemakuki mukati mebrowser yako. Izvi zvinova nechokwadi kuti makuki haasati achichengetwa. Nekudaro, pasina makuki, mamwe mabasa ewebhusaiti anogona kusashanda nemazvo kana anogona kusashanda zvachose. Sezvo makuki akachengetwa pamakomputa yako, unogona kungoadzima pachezvako. Kuti uite kudaro, unofanirwa kubvunza bhuku remubhurawuza rako.